VALIFATY : Mpanara-dia iray notetehin’ny rain’ilay jiolahy tamin’ny famaky tao amin’ny Distrikan’Antsohihy
Tsy nanaiky lembenana ihany koa ity raim-pianakaviana iray nanoloana ny fisamborana an-janany. 7 mars 2017
Lehilahy iray isan’ireo mpanara-dia sendra nifanena taminy no avy hatrany dia nosamboriny ary notetehiny tamin’ny famaky. Tsy namelany raha tsy tapitra ny ainy, ary lasa nitsoaka izy avy eo.
Ny herinandro lasa teo iny, nisehoana fanafihana tao Ambodimadiro ao anatin’ ny Kaominina Anahidrano, Distrikan’Antsohihy. Enin-dahy no nanafika tanàna tokony ho tamin’ny 9 ora alina. Ankoatra ny entana an-tokantrano maro najifan’ ireo olon-dratsy dia mbola navoakan’izy ireo ihany koa ny omby tany am-bala miisa roa ambin’ny folo. Tsy nisy sahy nikofoka ny mponina nandritra ny fandravaravana nataon’ireo jiolahy. Minitra vitsy nahalasan’izy ireo vao raikitra ny fanarahan-dia.
Tsy nandigana teo amin’ny 15 km miala ny tanàna dia nifanehitra ny roa tonta. Nikasa hanohitra hatrany ireto olon-dratsy kanefa tratran’ny be noho ny vitsy ka resy tosika ihany. Vaky nitsoaka ry zalahy, roa lahy kosa no azo sambom-belona ary notaritarihin’ny olona noentina any amin’ny biraon’ny Zandary. Teny an-dalana hiverina hody any an-tanàna ireo mpanara-dia no nahatratra lehilahy iray isan’ny fokonolona ny rain’ny raikalahy tamin’ireto voasambotra. Namaly ity farany, notetehiny tamin’ny famaky ilay tovolahy ary lasa nitsoaka izy taorian’izay. Hatramin’izao mbola ifampikarohana io rangahy io.
Ankoatra izay, dahalo roa lahy ihany koa no maty tao anaty fifandonana tany Ambodimandresy mbola ao anatin’ny Distrikan’Antsohihy hatrany. Ny zoma alina tokony ho tamin’ny 11 ora no nanafika tao an-toerana izy roa lahy ireto ary samy naka omby iray avy tao am-balan’olona. Efa hadiva mazava ny andro vao tsikaritry ny tompon-trano fa tsy tao ny ombiny roa.
Teo vao raikitra ny antso vonjy tamin’ny mpiara-monina nahafahana nanao ny fanarahan-dia. Tany Ankazobetsihay, Kaominina Ampandriakilandy no tratra ireto dahalo niaraka tamin’ny omby. Nisy ny fifampitifirana ary samy lavo tamin’izany izy roa lahy ireto. Ny omby kosa tafaverina soa aman-tsara amin’ny tompony.